समान छवि खोज - उल्टो छवि खोज
उस्तै छवि खोज उपकरणको साथ, तपाईं आफ्नो छविहरू Google, Yandex, Bing मा खोज्न सक्नुहुन्छ र उल्टो छवि खोज प्रविधिको साथ समान फोटोहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
समान छवि खोज के हो?
यदि तपाइँ समान छवि खोजी (रिभर्स छवि खोज) प्रविधि र तपाइँको साइटमा समान छविहरू कसरी फेला पार्ने बारे सिक्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यो लेख पढ्नुपर्छ। समान छवि खोजी नयाँ प्रविधि होइन, तर आज धेरै मानिसहरू अझै पनि यो बारे सचेत छैनन्। त्यसोभए यदि तपाईं छवि-आधारित खोजसँग परिचित हुनुहुन्न भने, यो लाज मान्न केही छैन। आधुनिक प्रविधि यति छिटो अगाडि बढिरहेको छ कि दैनिक परिवर्तनहरूको ट्रयाक राख्न र तिनीहरूको बारेमा सबै कुरा जान्न गाह्रो छ। यदि तपाईं समान छवि खोजको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यो लेख समीक्षा गर्न आवश्यक छ। पहिले तस्विर खोज विवरणहरू मार्फत जाऔं, त्यसपछि हामी कसरी अनलाइन समान चित्रहरू फेला पार्ने बारे कुरा गर्नेछौं।
तपाईंसँग बहु खोज इन्जिनहरू र समान छवि खोज उपकरणहरूमा निःशुल्क पहुँच छ जसले तपाईंलाई छवि अनलाइन फेला पार्न मद्दत गर्न सक्छ। समान छवि खोज अनुसन्धान र प्रेरणाको लागि सन्दर्भको नयाँ बिन्दु हो। Google छविहरूमा हामीले हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू फेला पार्न सक्छौं: पुराना तस्बिरहरू देखि शीर्ष 10 सेलिब्रेटी कपडाहरूको सूची र तपाईंले किन्न चाहनुहुने उत्पादन वा सेवाहरू पनि।
समान छवि खोजहरूले तिनीहरूको सामग्रीमा आधारित छविहरू पहिचान गर्न एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्छन्। तपाईले खोजिरहनु भएको उदाहरणहरू मात्र फेला पार्नुहुनेछ, तर तपाईले आफ्नो खोज प्रविष्टिसँग मिल्दोजुल्दो तस्बिरहरू पनि फेला पार्नुहुनेछ।
अनलाइन छवि खोज्नु कला ग्यालेरीमा खोज्नु भन्दा फरक छ; तपाईं एक पृष्ठमा सबै सामूहिक छविहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ डिजाइन, शैली, वा रंग योजना जस्तै केहि विशिष्ट खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो विशेष गरी उपयोगी छ। समान छवि खोजले धेरै पृष्ठहरू स्क्रोल नगरी वा गुगलको नतिजा पृष्ठमा गलत शीर्षकहरू र विवरणहरूबाट निराश नभई सम्पूर्ण छवि कस्तो देखिन्छ भनेर एक विचार प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँदछ।
तपाईंले गुगल वा कुनै अन्य खोज इन्जिन प्रयोग गरी समान छविहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यो विधि अविश्वसनीय छ किनभने अनलाइन खोज इन्जिनहरूले तपाइँको लगइन छविहरूलाई उनीहरूको डाटाबेसमा कम्तिमा सात दिनको लागि भण्डारण गर्नेछ। त्यसोभए, यदि तपाइँ आफ्नो गोपनीयतालाई जोखिममा राखेर छविहरूद्वारा खोजी गर्न चाहनुहुन्न भने, हामी तपाईंलाई यस प्रकारको खोजमा मद्दत गर्न सक्ने उत्तम रिभर्स छवि खोज उपकरणहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं।
एउटै खोज इन्जिनमा उस्तै छवि खोजले तपाईले चाहानु भएको परिणाम नदिन सक्छ। यस अवस्थामा, वैकल्पिक समान छवि खोज उपकरणहरूको सहारा लिन आवश्यक हुन सक्छ। यी विकल्पहरूको अतिरिक्त, त्यहाँ धेरै समान छवि खोज विकल्पहरू छन् जस्तै Reddit, BetaFace, PicWiser, Pictriev, Kuznech, NeoFace, TwinsOrNot, Azure र Picsearch। तपाईं Flickr, Getty Images, Shutterstock, Pixabay जस्ता स्टक फोटो साइटहरू पनि ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, Google, Bing, Yandex र Baidu यी तीन साइटहरूले तपाइँको लागि काम गर्नेछ।
तपाईले खोज्नु भएको छविको सुविधा अनुसार तपाईले विभिन्न खोज इन्जिनहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ रुसको तस्बिरको लागि, Yandex तपाईको पहिलो रोजाइ हुन सक्छ, र जनवादी गणतन्त्र चीनको तस्विरको लागि, Baidu तपाईको पहिलो रोजाइ हुन सक्छ। Bing र Yandex अनुहार स्क्यानिङ र मिलान मा सबैभन्दा सफल खोज इन्जिन को रूप मा बाहिर खडा छ।
समान तस्बिर खोजी प्रविधिको साथ, तपाईंले Google, Yandex, Bing जस्ता डाटाबेसमा अरबौं तस्बिरहरू समावेश गर्ने ठूला खोज इन्जिनहरूमा मानव तस्बिरहरू र मानव अनुहारहरू सजिलैसँग खोज्न सक्नुहुन्छ। समान तस्बिर खोज उपकरणको साथ, तपाईंले सेलिब्रेटीहरू र कलाकारहरूको फोटोहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं प्रशंसा गर्नुहुन्छ, वा तपाईंको प्राथमिक, हाई स्कूल, विश्वविद्यालयका साथीहरू र थप धेरै। यो कानुनी सेवा हो जुन पूर्णतया कानूनको अनुपालनमा छ र Google, Yandex, Bing द्वारा प्रस्ताव गरिएको छ।
उल्टो छवि खोज के हो?
उल्टो छवि खोज, नामले सुझाव दिए जस्तै, छवि खोज वा इन्टरनेटमा छविहरूमा फिर्ता खोजलाई जनाउँछ। उल्टो छवि खोजको साथ, तपाईंले पाठ-आधारित इनपुटहरूमा भर पर्नु पर्दैन किनभने तपाईं सजिलैसँग फोटो खोजीद्वारा छविहरू खोज्न सक्नुहुन्छ।
छवि आफैं खोजी गर्नाले तपाईंलाई धेरै विवरणहरू फेला पार्न मद्दत गर्न सक्छ जुन पाठ-आधारित खोजको साथ सम्भव छैन। यहाँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि छवि खोजी प्रविधि डिजिटल संसारमा विगत बीस वर्षदेखि छ र आज धेरै उपकरण र वेबसाइटहरूले यो प्रविधिलाई अपनाउछन् र निःशुल्क सेवाहरू प्रदान गर्छन्।
Google द्वारा प्रस्ताव गरिएको उल्टो छवि खोजको साथ , प्रयोगकर्ताहरूले आफूसँग भएको छवि प्रयोग गरेर खोजी गर्छन्। यसरी, त्यस छविसँग सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा अवस्थित प्रासंगिक छविहरू सूचीबद्ध छन्।
सामान्यतया खोज परिणामहरूमा;
अपलोड गरिएको छविसँग मिल्दोजुल्दो छविहरू,
समान छविहरू भएका वेबसाइटहरू,
खोजमा प्रयोग गरिएका चित्रका अन्य आयामहरू भएका चित्रहरू प्रदर्शित हुन्छन्।
उल्टो छवि खोज गर्नको लागि, अवस्थित छवि खोज इन्जिनमा अपलोड हुनुपर्छ। गुगलले यो तस्बिरलाई फेरि खोज्नु पर्ने अवस्थामा एक हप्तासम्म राख्ने छ। यद्यपि, यी छविहरू त्यसपछि मेटाइन्छ र खोज इतिहासमा रेकर्ड हुँदैन।
छवि खोज कसरी उल्टो गर्ने?
उल्टो छवि खोजको लागि, निम्न चरणहरू क्रमबद्ध रूपमा लिनुपर्छ:
उल्टो छवि खोज पृष्ठ खोल्नु पर्छ।
पृष्ठको खोजी बाकस माथिको चित्र लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।
खोज बाकसको दायाँ छेउमा रहेको क्यामेरा चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाइँ यसमा होभर गर्नुहुन्छ, यो भनिन्छ कि त्यहाँ छवि विकल्प द्वारा खोजी छ।
पृष्ठको खोजी बाकस माथिको छवि खण्डमा क्लिक गर्नुहोस्।
कम्प्यूटर मा सुरक्षित तस्वीर चयन गर्नुपर्छ।
खोज बटन क्लिक गर्नुहोस्।
मोबाइलमा समान छवि खोज
कम्प्युटरमा जत्तिकै सजिलो नभए तापनि मोबाइल उपकरणहरूमा समान छवि खोजी गर्ने कार्यहरू चाल्नु पर्ने कदमहरू थाह पाएर सहज बनाउन सकिन्छ।
मोबाइल उपकरणमा समान छवि खोज्न वा अवस्थित छवि कहाँ अवस्थित छ भनेर पत्ता लगाउन;
तपाईंले खोज्न चाहनुभएको छविमा क्लिक गर्नुहोस्।
यस चरणमा, मेनु देखा पर्दछ। यहाँबाट, "सफ्टमेडलमा यो छवि खोज्नुहोस्" विकल्प चयन गर्नुपर्छ।
यसरी, चित्रसँग सम्बन्धित परिणामहरू सूचीबद्ध छन्।
यदि फरक साइजका समान छविहरू परिणामहरूमा देखा पर्न चाहनुहुन्छ भने, दायाँमा "अन्य आकारहरू" विकल्प चयन गर्नुपर्छ।
छवि द्वारा खोज
यदि तपाइँ वेबमा समान छवि फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने, उत्तम तरिका भनेको उल्टो छवि खोजी प्रयोग गर्नु हो। वेबमा उत्तम छवि खोज उपयोगिता खोज्नुहोस् र यसलाई आफ्नो ब्राउजरमा खोल्नुहोस्। तस्विर खोज उपयोगिता प्रयोग गरेर, तपाईंले इनपुट विकल्पहरू फेला पार्नुहुनेछ, जसमध्ये एउटा छविद्वारा खोजी हो, जसमा तपाईंले खोज्न चाहनुभएको चित्र प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको स्थानीय वा क्लाउड आधारित भण्डारणबाट छवि प्रविष्ट गरेपछि तपाईंले 'समान छविहरूको खोजी गर्नुहोस्' बटन थिच्नु पर्छ।
समान छवि खोजले तपाईंको छवि डेटाको विश्लेषण पनि गर्दछ र डाटाबेसमा भण्डार गरिएका अरबौं छविहरूसँग तुलना गर्दछ। आधुनिक छवि खोज धेरै खोज इन्जिनहरूसँग एकीकृत हुन्छ जसले गर्दा यसले अरबौं छवि परिणाम पृष्ठहरूसँग तपाईंको छविहरू तुलना गर्न र तपाईंसँग मिल्दोजुल्दो वा सान्दर्भिक छवि परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्छ। आज रिभर्स छवि खोज प्रयोग गरेर समान छविहरू वा छविहरू साहित्यिक चोरी फेला पार्न कति सजिलो छ!
रिभर्स छवि खोज उपकरण समान छविहरू फेला पार्न द्रुत र सजिलो तरिका हो। आजको समान छवि खोज प्रविधिको साथ, हामी कुनै पनि छविको बारेमा हामीले चाहेको जानकारी पाउन सक्छौं। तपाईले छवि खोजको बारेमा जान्न आवश्यक छ कि यो सामान्य गुगल खोज जस्तो होइन। यसको मतलब तपाईको प्रश्नहरू फरक छवि हुनेछन् र तपाईले छवि र पाठमा आधारित परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंले उल्टो छवि खोजीसँग समान छविहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ र दर्जनौं अन्य उद्देश्यहरूको लागि यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सोच्न बन्द गर्नुहोस् र समान छवि खोज उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्, एक नि: शुल्क सफ्टमेडल सेवा, र तस्बिरहरू खोज्नुहोस् आफ्नो लागि यो खोज विधि अनुभव गर्न।